Ukubuyekezwa Kokubamba Iwebhusayithi: Buyekeza Ukusebenza Okusha Kokubamba & Khetha
I-Web Hosting Ehamba phambili
Thola i-Best Web Host
Ukubuyekezwa kweqiniso okubanjwe kwakha
ucwaningo oluzimele & idatha kanzima.
Izinzipho zethu Zokubamba Iwebhusayithi Okuhle
Qhathanisa & Khetha
Ukubamba Okubanjwe Kakhulu Kwebhizinisi<$ 5 / mo)
Imisebenzi Ehle kakhulu ye-imeyili yokusingatha
I-Free Website Hosting Ehamba phambili
Kuhle kakhulu Ukusingathwa kweWebhu okungenamkhawulo
Ukusingathwa kwe-WordPress ephethwe kahle kakhulu
Abanikezeli be-VPS Hosting abahamba phambili
I-Best Business Business Hosting
Ukusingathwa kwe-A2Ukubamba okwabiwe kuqala ku-$ 3.92 / mo.
BlueHostUkubamba okwabiwe kuqala ku-$ 2.95 / mo.
GreenGeeksUkusingathwa kwe-Eco-friendly kuqala ku-$ 2.95 / mo.
I-HostgatorI-Cloud hosting iqala ku-$ 4.95 / mo.
I-HostingerUkubamba okwabiwe kuqala ku-$ 0.80 / mo.
HostPapaUkusingathwa kwe-Canada kuqala ku-$ 3.95 / mo.
^ Zonke izibuyekezo Zomsingathi
InMotion HostingUkubamba okwabiwe kuqala ku-$ 3.99 / mo.
I-InterServerUkubamba ngokuhlanganyela ku-$ 5 / mo yokuphila.
I-Scala HostingUkusingathwa kwePSL VPS kuqala ku- $ 13.95 / mo.
SiteGroundUkubamba okwabiwe kuqala ku-$ 3.95 / mo.
TMDHostingUkubamba okwabiwe kuqala ku-$ 2.95 / mo.
I-WP EngineUkuphathwa kwe-WP ephathekayo ku-$ 29 / mo.
I-Web Host Eyisisekelo Indlela ukusingatha iwebhu negama lesizinda kusebenza ngayo.
Ibamba Iwebhusayithi Izindlela ezimbili zokubamba iwebhusayithi esebenzayo.
Khetha umgcini weWebhu Uhlu lwamaphoyinti angu-16 lokungenisa abathengi.
Funda Isethaphu SSL Qhathanisa futhi uthenge i-SSL eshibhile kusuka ku-CA ethembekile.
Qala ibhulogi Isiqondiso ngesinyathelo sokuqala sokuqala ibhulogi.
Khulisa Ibhulogi Yakho Izindlela eziyi-15 zokukhuthaza nokukhulisa ibhulogi yakho.
^ Zonke Izindatshana
I-VPS Yokusingatha Umhlahlandlela Indlela umsebenzi we-VPS? Isikhathi sokushintsha nini?
Shintsha i-Web Host Indlela yokudlulisa amawebhusayithi akho kumphathi omusha.
Izindleko ze-Web Hosting Kufanele ukhokhe malini ngokusingatha iwebhu?
Yenza Iwebhusayithi Izindlela ezintathu ezilula zokwakha iwebhusayithi yakho.
Isebenza kanjani i-VPN I-VPN isebenza kanjani futhi udinga eyodwa?
Thola i-VPN ehamba phambili Ungayikhetha kanjani futhi nokuthi ungayithenga kuphi i-VPN?
I-WHSR Web Host SpyZembula i-infra ne-tech ngemuva kwanoma iyiphi iwebhusayithi.
I-WHSR Uptime CheckerIsheke esisheshayo uma iwebhusayithi isezansi.
Ukuqhathaniswa kwe-Host Host Qhathanisa kuze kube yizimboni zewebhu ze-3 ngesikhathi esisodwa.
Ikhaya » Ukubuyekeza kokusingatha
Ukubuyekezwa kweWebS yeWWSR
NguJerry Low & Ithimba le-WHSR
Kubuyekezwe: May 07, 2020
Ukubuyekezwa kweWebhusayithi ye-60+ namaqiniso asheshayo
Kunezici eziyisithupha ezibalulekile esizibheka lapho sihlola umgcini we-web: Ukusebenza kweServer, izici ezibalulekile, ukusekelwa kwamakhasimende, ubungani bomsebenzisi, idumela lenkampani nempendulo yomsebenzisi eqinisekisiwe, kanye nentengo. Sisebenza ngokuhlola amasayithi ezinkampanini ezisingatha thina bese sisebenzisa uhlu lokuhlola olungamaphuzu angama-80 ukukala ikhwalithi yensizakalo yokubamba. Ungafunda kabanzi ngokuthi sikala kanjani umnikazi wewebhu lapha.
000webhost 1GB 10GB i-cpanel $ 0.00 / mo - -
Cloudways 25 GB I-1 TB Endlini $ 10 / mo - WHSR10
TMDHosting Unlimited Unlimited i-cpanel $ 5.95 / mo 60 Days -
I-20i 10GB 50GB wordpress $ £ 4.58 / mo izinsuku 30 -
I-WPWebHost 30 GB Unlimited plesk $ 9.00 / mo 100 Days APRILDEAL50
Ukubamba kwe-1 ne-1 Unlimited Unlimited Isiko $ 4.99 / mo 30 Days -
Kinsta 10 GB Ukuvakasha kwe-20,000 wordpress $ 25 / mo izinsuku 30 -
I-WightWeb 10GB Unlimited i-cpanel $ 4.95 / mo izinsuku 30 -
FastComet I-15 GB SSD Unlimited i-cpanel $ 2.95 / mo izinsuku 45 -
I-Temok 50 GB Unlimited i-cpanel $ 3.99 / mo 15 Days OLEG7513
Ukusingathwa kwe-ResellerClub Unlimited Unlimited i-cpanel $ 2.39 / mo 30 Days I-HOSTINGDEAL
Zyma Hosting 25 GB Unlimited i-cpanel $ £ 1.49 / mo 30 Days -
LiquidWeb I-50 GB SSD I-5 TB Isiko $ 66.33 / mo - I-WordPress33
I-Host1Plus Unlimited Unlimited i-cpanel $ 4.50 / mo 14 Days -
I-Hostinger Unlimited Unlimited i-cpanel $ 3.99 / mo 30 Days Xhumanisa ukusebenza
FastWebHost 20 GB Unlimited i-cpanel $ 2.95 / mo 30 Days Xhumanisa ukusebenza
I-GoGetSpace Unlimited Unlimited i-cpanel $ 3.99 / mo 30 Days WHSR-SPECIAL2017
I-ScalaHosting Unlimited Unlimited Isiko $ 6.95 / mo 30 Days -
I-SkyToaster 10 GB 500 GB i-cpanel $ 9 / mo 45 Days -
ZeroStopBits 10 GB Unlimited i-cpanel $ 3.50 / mo 30 Days -
I-WP Engine 10 GB 50 GB wordpress $ 22.50 / mo 60 Days I-WPE3Free
I-WebHostingHub Unlimited Unlimited i-cpanel $ 4.99 / mo 90 Days -
I-WebHostFace I-20 GB SSD Unlimited i-cpanel $ 1.09 / mo 30 Days WHSRPC
I-StartLogic Unlimited Unlimited i-cpanel $ 5.99 / mo 30 Days -
SiteGround 20 GB Unlimited Isiko $ 14.99 / mo 30 Days Xhumanisa ukusebenza - Ukukhishwa kwabasebenzisi abasha
RoseHosting 8 GB 1000 GB i-cpanel $ 11.95 / mo 30 Days -
I-Pressidium Hosting 10 GB Unlimited wordpress $ 42 / mo 60 Days -
PowWeb Unlimited Unlimited i-cpanel $ 3.88 / mo 30 Days -
AmadodaHost 5 GB 10 GB i-cpanel $ 8 / mo 60 Days -
Ukusingatha okulungile - - wordpress - - -
I-One.com 25 GB Unlimited i-cpanel $ 2.45 / mo 15 Days -
Omnis Network Unlimited Unlimited i-cpanel $ 5.95 / mo 30 Days -
I-Network Solutions 300 GB - i-cpanel $ 9.96 / mo 30 Days -
I-Netmoly 10 GB Unlimited i-cpanel $ 5.95 / mo 45 Days WHSR
Miss Hosting Unlimited Unlimited i-cpanel $ 8.31 / mo 45 Days -
MidPhase Unlimited Unlimited i-cpanel $ 3.48 / mo 30 Days -
Ithempeli lezindaba 20 GB I-1 TB plesk $ 15.83 / mo 30 Days -
Ukubamba kwe-MDD 1 GB Unlimited i-cpanel $ 3.15 / mo 30 Days -
M3Server 30 GB I-5 TB inhouse $ 15 / mo 30 Days WHSR20
I-LunarPages Unlimited Unlimited Isiko $ 6.95 / mo 30 Days -
I-Little Oak Hosting 5 GB 50 GB i-cpanel $ 6.67 / mo 30 Days -
I-JustHost Unlimited Unlimited i-cpanel $ 7.95 / mo 30 Days -
IX Web Hosting - - - $ 2.95 / mo 30 Days (Xhumanisa kusebenze)
iPage Unlimited Unlimited vdeck $ 2.49 / mo 30 Days (Xhumanisa kusebenze)
I-InterServer Unlimited Unlimited i-cpanel $ 4.25 / mo 30 Days WHSRPENNY
InMotion Hosting Unlimited Unlimited i-cpanel $ 5.99 / mo 90 Days (Xhumanisa kusebenze)
HostUpon Unlimited Unlimited i-cpanel $ 9.95 / mo 30 Days -
HostRocket 5 GB 200 GB i-cpanel $ 9.98 / mo 30 Days -
HostPapa Unlimited Unlimited i-cpanel $ 4.95 / mo 30 Days WHSR
Hostmonster Unlimited Unlimited i-cpanel $ 8.45 / mo 30 Days -
HostMetro Unlimited Unlimited i-cpanel $ 3.95 / mo 30 Days -
I-Hostgator Unlimited Akufakiwe i-cpanel $ 8.95 / mo 45 Days I-WHSRBUILD
Umbala wendawo 10 GB 1000 GB i-cpanel $ 9.30 / mo 5 Days I-NEWVPS
GreenGeeks Unlimited Unlimited i-cpanel $ 3.95 / mo 30 Days (Xhumanisa kusebenze)
GoDaddy Unlimited Unlimited i-cpanel $ 9.39 / mo 30 Days (Xhumanisa ukusebenza)
Host Unlimited Unlimited i-cpanel $ 2.75 / mo 45 Days -
I-DTS-NET 10GB Unlimited i-cpanel $ 0.63 / mo 60 Days WHSR
I-DreamHost Unlimited Unlimited Isiko $ 8.95 / mo 97 Days WHSR25
Ukubamba i-Dot5 Unlimited Unlimited vdeck $ 5.95 / mo izinsuku 30 -
I-Paradigm ebalulekile 30 GB Unlimited i-cpanel $ 10 / mo - -
CoolHandle Unlimited Unlimited i-cpanel $ 4.95 / mo 30 Days -
I-BulwarkHost 5 GB 250 GB i-cpanel $ 3.12 / mo 30 Days WHSR40
BlueHost 50 GB Unlimited i-cpanel $ 3.95 / mo 30 Days (Xhumanisa kusebenze)
Ukubamba kwe-B3 5 GB 50 GB i-cpanel $ 35.00 / mo - -
I-ASmallOrange 5 GB 50 GB i-cpanel $ 7.17 / mo 90 Days -
Arvixe Unlimited Unlimited i-cpanel $ 7.00 / mo 45 Days -
I-AltusHost 10 GB Unlimited i-cpanel $ 5.95 / mo 45 Days -
Ukusingathwa kwe-A2 Unlimited Unlimited i-cpanel $ 4.90 / mo 30 Days WHSR / SAVE63
* Ukudalulwa Kokuthola: I-WHSR ithola isinxephezelo kusuka kokuqukethwe kwewebhusayithi yethu. Siyakhokhelwa lapho abasebenzisi bethu bethenga abathengi bethu.
Ungayikhetha Kanjani I-Web Host efanele?
Sinquma kanjani uma umphathi wewebhu elungile? Ingabe ukufaka komkhawulokudonsa kanye nediski isitoreji kusenendaba kulezi zinsuku? Yiluphi uhlobo lwensizakalo yokusingathwa okufanele uhambe nayo?
Ake ngikusize uthole izimpendulo zale mibuzo kanye nokunye. Ngizokuqondisa lapho kuhamba ngendlela efanele ukuze uqinisekise ukuthi wazi kahle ukuthi ukhetha kanjani ukusingathwa kwewebhu okufanele.
Uhlu lokuhlola lwe-Web Host Selection
Kunezinto eziningi kakhulu ezibandakanyekile ekubukezeni nasekukhetheni umgcini we-web - ongadida abantu abaningi. Nanka amaphuzu ayi-16 okufanele udlule kuwo ngaphambi kokuthatha umphathi wakho wewebhu omusha.
Yazi izidingo zakho zokubamba
Hlola ukwethembeka kweseva kanye neziqinisekiso zokuphumula
Ukubamba izinketho zokubamba
Izinombolo ze-addon domain
Amanani wokubhalisa ngokuncintisana kwamanani
Inqubomgomo yokubuyiselwa imali kanye nesikhathi sokuvivinya samahhala
Izici ezibalulekile zokusingatha
Izici ze-e-commerce nokusekela
Ukusingatha i-imeyli ([Email protected])
Phila ukwesekwa kwengxoxo / yocingo
I-1. Yazi Izidingo Zakho Zokubamba
Awukwazi ukuthola i-web host yangempela ngaphandle kokwazi okudingayo. Ngakho-ke ngaphambi kokuhamba phambili - faka konke eceleni (kuhlanganise nalesi siqondiso ufunda) futhi ucabange ngalokho okudingayo ngempela.
Uhlobo luni lwewebhusayithi oyakhayo?
Ingabe ufuna into ejwayelekile (ibhulogi ye-WordPress, mhlawumbe)?
Udinga izinhlelo zokusebenza ze-Windows?
Udinga ukwesekwa kweskripthi esithile (isib. PHP)?
Ingabe iwebhusayithi yakho idinga isofthiwe ekhethekile?
Ikhulu kangakanani (noma encane) ingabe ivolumu yakho yethrafikhi yakho iyahamba?
Lezi ezinye zezinto eziyisisekelo ozidingayo ukuziphendulela wena.
Isithombe engqondweni yakho ukuthi ufuna ukuthi iwebhusayithi yakho ibe khona manje, bese wakha kulowo mbono uze ube cishe izinyanga ze-12 ngaphambi kwalokho. Ungacabangi nje ukuthi yini ofuna ukuyihlinzeka, kodwa nokuthi yini engase ifune noma idinga.
Lokhu ekugcineni kuphelela eqinisweni elilula kakhulu. Zingakanani izinsiza ezizodinga iwebhusayithi yakho? Uma usebenzisa ibhulogi yomuntu siqu noma iwebhusayithi encane noma ephakathi, akunakwenzeka ukuthi uzodinga amandla engeziwe engeziwe we-VPS.
Uma uqhuba iseva enkulu yebhizinisi noma wenza imisebenzi eminingi ye-eCommerce, i-VPS noma iseva ezinikezele ingadingeka ukuphatha ivolumu enkulu kakhulu yomgwaqo kanye nokwethembeka okungeziwe.
Ekupheleni kosuku, ukhetho ngalunye lunamazinga okubiza nezindleko, ngisho naphakathi kwezigaba ezimbili zokubamba iwebhu engikuchazile lapha. Ukunakwa kudinga ukukhokhwa ngemininingwane futhi kufaniswe nezidingo zewebhusayithi yakho.
Uma ususha ngokuphelele ...
Nge-newbies, umthetho olula uqala encane nge-akhawunti eyabelwe ngokubamba iqhaza.
I-akhawunti eyabelwe ngokubamba ishibhile, kulula ukulondoloza, futhi inele izingosi eziningi ezintsha. Kubuye kukuvumela ugxile ekwakheni isayithi lakho ngaphandle kokukhathazeka ngeminye imisebenzi ye-server-side efana nokugcinwa kwedatha nokuphepha kweseva.
I-Alos, ngoba izinhlelo zokubamba zihamba kahle namuhla, kungcono ukuqala amancane futhi usebenze ngendlela yakho njengoba ithrekhi yakho yesayithi ikhula. Kuzoba nemali engcono kakhulu futhi uvumele amakhono akho wokuphatha ukuba ahlele ngokwemvelo nge-website yakho ye-traffic.
I-2. Ukuthembeka kweseva / Izikolo zokuPhakamisa
Akukho okubaluleke ukwedlula ukuba nomsingathi we-24 × 7 we-web host osebenzayo, ngemuva kwakho konke, izivakashi zakho zingase zifike kusayithi lakho zivela kwizikhathi zesikhathi emhlabeni wonke. Udinga ukusingathwa kwewebhu okuzinzile, zombili ngokuya ngamaseva wazo kanye nokuxhumeka kwenethiwekhi. I-99.95% ibhekwa njengento ejwayelekile kulezi zinsuku, ngisho nama-akhawunti abamba ngokubamba; noma yini engezansi kwama-99% ayemukeleki. Ama-akhawunti we-premium ajwayele ukuziqhayisa ngama-99.99% noma isikhathi esingcono.
Kukhona izindlela eziningi zokuthola ulwazi lwe-web host hosttime. Indlela elula yokwenza njalo yiyo ukufunda ukubuyekezwa kwethu kokusingatha - lapho sishicilela khona amarekhodi okugcina isikhathi (bheka amasampula ngezansi).
Ngaphandle kwalokho, ungakwazi ukulandelela umphathi wakho wewebhu amathuluzi wokuqapha iseva - eziningi zamathuluzi zitholakalayo mahhala, noma okungenani zinikeza isikhathi sokulinga. Zisebenza kahle futhi kulula ukuyisebenzisa.
Izibonelo: Amasampula we-Uptime ashicilelwe ku-WHSR
Sigcizelela isikhathi esengeziwe ekubuyekezweni kwethu kokusingathwa, ngezansi kunamanye amarekhodi esidlule esiqoqe sisebenzisa i-Uptime Robot. Sethule futhi I-hostScore (ithuluzi lokulandela i-automated uptime track) emuva ngoSepthemba 2019, ngiphakamisa labo abafuna irekhodi le-up up real Check out.
Amarekhodi wesikhathi se-SiteGound (Src: Ukubuyekezwa Kokubamba NgeSayithi)
Amarekhodi wesikhathi se-InMotion Ukusingathwa (Src: Ukubuyekezwa kwe-InMotion Hosting)
I-3. Izinketho Zokuthuthukiswa Kweseva
Kunezinhlobo ezahlukene zamaseva wokubamba atholakalayo emakethe: Kwabiwe, i-VPS, ezinikezele, nokusingathwa kwamafu.
Ukusingathwa okwabiwe kaningi kungukukhetha okungcono kakhulu kwabaqalayo, ama-blogger, kanye nabanikazi bewebhusayithi yakho uqobo ngoba kuyindlela eshibhile kakhulu yokubamba iwebhu, ebiza cishe ama- $ 5 - $ 10 ngenyanga.
Ngezinhlelo zokubamba ezabiwe, uzobe wabelana ngezinsizakalo zakho zeseva nabanye abasebenzisi, okusho ukuthi ukhokha okuncane ekusingatheni ngoba izindleko zakhona zabiwa phakathi kwabanye abasebenzisi.
Ubani okufanele ahambe ngokubamba ngokuhlanganyela?
Ngokuvamile, uma uthola ngaphansi kwezivakashi ze-5,000 ngenyanga, ke kungcono ukuya kosokhaya okwabiwe. Lapho iwebhusayithi yakho ikhula iba nkulu futhi uthola izivakashi eziningi, ungafuna ukuyela kwiseva enamandla kakhulu.
Ukubambisana Kwabelwe: Kubiza kakhulu, kulula ukulondoloza; control control server kanye namandla.
A I-Virtual Private Server (VPS) Ukusingatha kuyafana nokusingathwa okwabiwe ngakho ngokuthi ihlanganyela neseva eyodwa ebonakalayo. Umehluko ukuthi unezixhobo zakho zeseva ezihlukile kwabanye abasebenzisi.
Ngokusingathwa kweVPS, ngokuyisisekelo isinyathelo esivela ekubanjweni okwabiwe ngokuya ngamandla nangejubane kepha kushibhile kunokuthola iseva yakho ezinikezele. Ngokuya nge-CPU nememori (i-RAM) oyitholayo, ukusingathwa kweVPS kungabiza noma kuphi phakathi kwe- $ 50 kuya ku- $ 200 ngenyanga.
Ukusingathwa kwe-VPS: Ukulawula okuningi kwesiphakeli namandla; umklomelo kunokubamba ngokuhlanganyela.
I-Cloud hosting ihlanganisa amakhulu wamaseva ngamanye ndawonye ukuze asebenze njengeseva enkulu enkulu. Umbono nge-web based hosting hosting wukuthi ungakwazi kalula ukwandisa futhi uthuthukise izidingo server yakho uma kunesidingo.
Isibonelo, uma ngokungazelelwe ubhekene nenani elikhulu ngokungajwayelekile lethrafikhi yewebhu, akudingeki ukhathazeke ngokuthi uzovalwa ngoba inkampani yokusingatha ingakwamukela kalula ukugcwala kwethrafikhi ngokungeza izinsiza kusebenza zeseva.
Imali yokubamba ifu ijwayele ukushintsha njengoba ijwayele ukusebenzisa ifomu lokuhlelwa kwezindleko zokukhokha.
I-Cloud Hosting: Ikhululekile kakhulu futhi iyabiza izindleko; I-curve yokufunda ehamba phambili ukuqala.
Ukusingathwa kweseva ezinikezelwe kulapho uneseva ephelele yomzimba enikezelwe kuwebhusayithi yakho. Hhayi kuphela ukuthi unokulawula okugcwele kwemithombo yakho ye-server, kodwa futhi akudingeki ukhathazeke ngamanye amawebhusayithi enza izinsiza zakho futhi anciphise iwebhusayithi yakho.
Amawebusayithi amakhulu futhi abe nobukhulu obukhulu, iseva ezinikezelwe ngokuvamile iphakanyiswa ukuze ibambe inani eliphakeme lezithuthi. Izindleko zesiphakeli ezinikezele ziphakeme kakhulu kunokubamba ngokuhlanganyela futhi ungalindela ukukhokha kusuka ku-$ 100 nangaphezulu ngenyanga.
Ukusingatha okuzinikezele: Amandla we-server amakhulu nokulawula iseva ephelele; zidinga izindleko eziphakeme kakhulu namakhono.
Ama-web host okwabelwana ngawo anamandla futhi ngokuvamile anele kubasebenzisi abasha. Uma ucabanga ukuthi iwebhusayithi yakho ikhula ngokushesha impela cabanga ukukha a i-virtual yangasese (i-VPS) noma iseva ezinikezele ukuze uthole amandla amakhulu okucubungula, amandla okukhumbula, idiski yokugcina, futhi mhlawumbe ngisho nezici zokuphepha ezithuthukisiwe.
Izinkampani zokubamba eziphindaphindekayo ezinikeza zonke izindlela zokubamba ezine (Kwabiwe / i-VPS / ezinikezelwe / iCloud) zifaka: Ukusingathwa kwe-A2, InMotion Hosting, Futhi SiteGround.
I-4. Izizinda eziningi ze-Addon
Amagama wesizinda ashibhile - eshibhile kakhulu ngoba ngokuvamile kunzima ukumelana nokungabi nabanikazi abangaphezu kweyodwa.
Ngokwami ​​ngingumnikazi wamagama wesizinda angaphezu kwama-50 kuma-akhawunti wami we-GoDaddy nama-NameCheap - futhi angingedwa. Ngokuvumelana ne inhlolovo ye-Web Hosting Talk - I-80% yabavoti banabo abangaphezu kwezizinda ze-5 futhi ngaphezu kwe-20% yabavoti abangaphezu kuka-50!
Ukuze sithole lezi zizinda ezingaphezulu, sidinga isikhala esengeziwe sokubamba. Yingakho kubalulekile ukuba ne-akhawunti yokubamba iwebhu evumela ukuthi ungeze izizinda eziningi.
Bheka isibhamu sewebhu esingaphezu kwesizinda se-addon se-50
Ngokuvamile, izinkampani eziningi zokubamba iqhaza ezabelwe isabelomali zivumela okungenani izizinda ze-addon ze-25 ku-akhawunti eyodwa nanamuhla kodwa awukwazi neze ukuqiniseka. Eminyakeni ethile edlule ngangingenandaba futhi ngisayinwe kwi-web host evumela isizinda esisodwa kuphela. Ngeshwa, ngibambe ngaphezulu kwezizinda zepaki ze-10 ngaleso sikhathi. Ungaphindi iphutha lami - hlola umthamo wesizinda ngaphambi kokuthenga.
Ithiphu ewusizo: Iwebhusayithi ye-Addon = ehlukanisiwe ne-domain ehlukile ongayibamba kwi-host host yewebhu; Domain Parked = eyengeziwe domain "park" for domain ukuthumela noma imeyili ukusingatha.
I-5. Ukubhalisa ngeNtengo Yokuvuselela
Amadili wokusingatha, ikakhulukazi ukwabelana ngokuhlanganyela, ngokuvamile eshibhile ngesikhathi sokubhalisa. Qaphela ukuthi lezi zivame ukuza ngentengo enkulu yokuvuselela, ngakho-ke qaphela ngaphambi kokuchofoza 'ukuthenga' kulolu hlelo olukunikeza inani lokubhalisa ku-80% isaphulelo!
Lena yindabuko evamile.
Ngaphandle kokuthi uzimisele ukudonsa phakathi kwamakhompyutha amabili wewebhu noma amathathu njalo eminyakeni emibili, ayikho indlela yokugwema izindleko zokuvuselelwa kwentengo.
Ekubuyekezweni kwethu okusingathiwe, sinciphisa iphoyinti labasokhaya abaqoqa intengo yabo ngaphezulu kuka-50% ekuvuseleleni. Kepha ngokuvamile ngilungile nezinkampani ezivuselela amanani entengo angaphansi kwe-100% - okusho ukuthi, uma ubhalisa umnikazi ngo- $ 5 / mo, imali yokuvuselela akufanele iqe ku- $ 10 / mo.
Ukuze ugweme noma yikuphi ukumangala okungajabulisayo, hlola iToS futhi uqinisekise ukuthi ulungile ngamazinga wokuvuselela ngaphambi kokubhaliswa.
Ithiphu ewusizo: Enye indlela esheshayo yokwenza lokhu ukuchofoza isixhumanisi se-ToS yenkampani (ngokuvamile ngaphansi kwekhasi eliyisiqalo), cindezela i-Ctrl + F, futhi useshe igama elingukhiye "ukuvuselela" noma "ukuvuselela".
Qhathanisa: Ukubhalisa nge-Intengo Yokuvuselela
Qaphela ukuthi ngokuvamile izinkampani zokubamba ezishaya amanani abo ekubhaleni yizo ezifaka intengo yokuvuselela kakhulu.
Ukusingathwa kwe-A2 $ 3.92 / mo $ 7.99 / mo + 100% Vakashela ku-intanethi
I-AltusHost € 4.95 / mo € 4.95 / mo Akukho ukushintsha Vakashela ku-intanethi
I-DreamHost $ 9.95 / mo $ 9.95 / mo Akukho ukushintsha Vakashela ku-intanethi
I-Hostgator $ 8.95 / mo $ 13.95 / mo + 56% Vakashela ku-intanethi
HostPapa $ 3.36 / mo $ 7.99 / mo + 110% Vakashela ku-intanethi
InMotion $ 3.99 / mo $ 7.99 / mo + 100% Vakashela ku-intanethi
I-InterServer $ 5.00 / mo $ 5.00 / mo Akukho ukushintsha Vakashela ku-intanethi
iPage $ 1.99 / mo $ 7.99 / mo + 300% Vakashela ku-intanethi
LiquidWeb $ 69 / mo $ 69 / mo Akukho ukushintsha Vakashela ku-intanethi
I-Pressidium $ 42 / mo $ 42 / mo Akukho ukushintsha Vakashela ku-intanethi
I-WP Engine $ 29 / mo $ 29 / mo Akukho ukushintsha Vakashela ku-intanethi
* Qaphela: Amanani we-HostPapa kanye ne-InMotion Hosting asuselwa kumadivayisi akhethekile we-WHSR. Zonke izintengo zihlolwe zinembile ngoJanuwari 2019.
I-6. Inqubomgomo Yokubuyiselwa Kwemali Nesikhathi Sokulingwa kwamahhala
Uma kufanele ukhethe ukukhansela uhlelo lwakho lokubamba ngesikhathi sokuhlolwa, ingabe inkampani inikeza isiqinisekiso esiphelele semali?
Iyini inqubomgomo yokubuyisa imali yenkampani yokubamba ngemuva kokuphela kwesikhathi sesilingo?
Zikhona yini izindleko zokukhansela noma izimali ezengeziwe?
Lezi yiminye imibuzo eyisisekelo okufanele uthole izimpendulo ngaphambi kokubhalisa.
Kubalulekile ukwazi ukuthi umhlinzeki wakho wokusingatha uphatha kanjani imali yokubuyisela amakhasimende ukuze ungalahlekelwa imali kakhulu uma izinto zihamba kahle.
Kunezinkampani ezithile zokubamba ezikhokhisa imali yokukhansela okungekho emthethweni lapho abasebenzisi bekhansela ama-akhawunti abo ngesikhathi sokuhlolwa. Iseluleko sethu? Gwema lababanikeli bokusingatha yonke imali! Ngakolunye uhlangothi, izinkampani ezithile zokubamba zihlinzeka ngeziqinisekiso zanoma iyiphi imali lapho ungacela khona ukubuyiselwa kwemali emva kokuthi isikhathi sakho sokuvivinywa sesiphelile (okuhle kakhulu).
I-7. Izici ezibalulekile ku-Host Host
Impela, ezinye izinto ezinjengokulawulwa kwamafayela nezibalo zesayithi cishe zihlala zikhona, kepha futhi zigcine iso le-ftp / sftp, okukodwa kokuqhafaza, nokuphathwa kwe-DNS. Futhi, kufanele kube nemenenja yefayela - qiniseka ukuthi ungahlela ifayela le-.htaccess kusuka lapho.
Chofoza okukodwa Faka
Ukufaka okukodwa okufakiwe kufaka ama-flavour ahlukahlukene, njenge Softalucous or Isikripthi esilula.
Ideshibhodi ye-SiteGround cPanel yenziwe ngokwezifiso ngakho-ke kulula ukufaka ngokuzenzakalelayo izinhlelo zokusebenza ezithandwayo njenge-WordPress, PrestaShop, neJoomla.
Noma iyiphi indlela, inhloso ye-installer eyodwa yokuchofoza ukwenza impilo yakho ibe lula kakhulu. Lezi zinhlobo zokufaka amawijethi okusiza ukufaka izinto ezifana ne-WordPress, Joomla, Drupal, noma ezinye izinhlelo zokusebenza zewebhu. Konke okuzodingeka ukwenze kugcwalisa amanye amagama futhi mhlawumbe ucacise isiqondisi noma kanjalo endleleni.
Ukufinyelela kwe-FTP / SFTP
Ukufinyelela kwe-FTP / SFTP kuyigugu ngokuhambisa amafayela amaningi ngokuphepha. Abanye abasiziphepheli bazama ukuhamba nomphathi wefayela kuphela, kodwa lokho kuvame ukulinganiselwe.
Ukufinyelela kwe-SSH ku-InMotion Hosting.
Ukufinyelela kwefayela kwe-.htaccess
Ifayela le-.htaccess linamandla kakhulu futhi lingakusiza wenze izinguquko zokuphatha indawo yonke. Ilawula cishe yonke into kusukela ekuqondiseni kuze kufike ekuqinisekiseni nasekuphathweni kwephasiwedi, futhi kuyoba okubalulekile esikhathini esithile emizamweni yakho yesikhathi esizayo.
Ngaphandle kokuthi ungene ngemvume kwi-host host ye-web ekhethekile njenge-WP Engine ne-Pressidium (lokhu kugxila kwi-WordPress ukubamba ngokuyinhloko), lezi zici eziyisisekelo kufanele zibe nazo. AWAKHO UKUHLEKA ukuxazulula nabanikazi bokusingatha abangabanikeli.
Qhathanisa izici ezibalulekile ezinikezwa izinkampani ezahlukene zokubamba usebenzisa yethu Ithuluzi lokuqhathanisa nethimba. Nazi ezinye iziqhathaniso ezijwayelekile zokusesha ukuze uqalise -
I-A2 Ukusingatha i-InMotion Hosting vs Interserver
I-A2 Ukusingatha i-BlueHost
Hostgator vs InMotion Ukusingatha
Hostinger vs InMotion Ukusingatha
I-8. Izici ze-e-Commerce
Ingabe uqhuba iwebhusayithi ye-e-commerce?
Ingabe usebenzisa noma iyiphi isofthiwe ethile yokuthenga inqola?
Ingabe udinga ukucubungula ukuhweba kwebhizinisi kuwebhusayithi yakho?
Ingabe udinga ukwesekwa okukhethekile kwezobuchwepheshe (ie, PrestaShop guide, njalonjalo)?
Uma u-yebo, kubalulekile ukuthi ukhethe umphathi webhubhu ngokwanele ukwesekwa kwezici ze-e-commerce. Isitifiketi se-SSL, i-IP ezinikezelwe, nokuchofoza okukodwa kokungena kwe-software yokuthenga inqola ezinye zezici ezibalulekile / ezisekelayo ozodinga.
Funda isihloko sika-Azreen I-5 best hosting web amabhizinisi amancane.
I-9. I-Panel Control Panel Yokusingatha Ukusetshenziswa Okulula
Iphaneli yokulawula yomsebenzisi enobungane elinomsebenzi obanzi kubaluleke kakhulu, ngoba ingqondo ye-akhawunti yakho yokubamba.
Akunandaba uma kunjalo i-cPanel noma iPlesk noma ipaneli yokulawula evela eceleni (njengokuhlinzekelwa yiGoDaddy), inqobo nje uma isebenziseka kalula futhi iza nayo yonke imisebenzi edingekayo. Ngaphandle kwephaneli yokulawula eyanele, uzoshiyelwa isihe sabasebenzi bokusekela ubuchwepheshe be-tech - noma ngabe konke okudingayo kuyinsizakalo eyisisekelo.
Ngake ngine-akhawunti ne-IX Web Hosting, futhi nakuba engeyona impi embi - ama-IP amaningi azinikezele ngentengo enengqondo kakhulu, kanye nokusekelwa okukhulu kwe-tech - ngadingeka ukukhansela i-akhawunti yami ngoba iphaneli layo lokulawula langokwezifiso laliyi-user-friendly.
Iphaneli yokulawula esetshenziselwa amahhala wewebhu ahlukahlukene
I-20i - -
Ukusingathwa kwe-A2 - -
I-JustHost - -
I-Scala Hosting - -
I-WPWebHost - -
I-10. Ukumiswa kwe-Akhawunti: Yiziphi ukulinganiselwa?
Nayi ithiphu yemali amasayithi amaningi wokubukeza asezokutshela yona: Izinkampani ezisingatha izinkampani zizodonsa ipulaki futhi zimise okwesikhashana i-akhawunti yakho uma usebenzisa amandla amaningi we-CPU noma wephula imithetho.
Iqiniso lokusingathwa okungenamkhawulo
Kungenzeka uthole igama elithi "Ukusingathwa Okunganqunyelwe" kwabanye abahlinzeki bokusingathwa be-web abadumile. Ukusingathwa okungenamkhawulo yi-buzzword esetshenziswe kubanikezeli abaningi bokubamba okwabiwe ukuchaza ikhono labo lokuletha isitoreji esingenamkhawulo kanye ne-bandwidth.
Ngeshwa, izixazululo eziningi ezingenamkhawulo zokusingatha kuncane kunalokho okucabangayo.
Nansi into, uhlelo “Lokubamba Okungalinganiselwe” “alunamkhawulo” kuphela uma usebenzisa okungaphansi kwemithombo yeseva etholakalayo kuwe.
Ngokuphikisana nenkolelo ethandwayo, i-bandwidth nendawo yesitoreji akuzona lezo ezivame ukukhawulelwa yizinkampani. Esikhundleni salokho, yi-CPU nememori ebekwe umkhawulo.
Isibonelo, iwebhusayithi enezivakashi ze-5,000 ngosuku angeke ikwazi ukuphatha ithrafikhi uma kunomkhawulo kwimemori namandla e-CPU, ngaphandle kokuthi kune-bandwidth eyanele ye-server.
Akujwayelekile ukuthi izinkampani zifake imikhawulo ekuxhumaneni kwe-database efanayo noma inombolo yemijikelezo ye-CPU i-akhawunti engayisebenzisa, kuma-ToS abo.
Kuyafana ne-buffet ye-all-you-can-eat, ngoba, umhlinzeki wokusingathwa akunika ukufinyelela kwizisetshenziswa "ezingenamkhawulo" kepha uzosebenzisa inani elifanele.
UDeveli uku imininingwane
Yize kunemikhawulo yezinhlelo "ezingenamkhawulo", nokho ziphakeme kakhulu. Ukufunda ukuphrinta okuhle Kwimigomo Yesevisi yenkampani (i-ToS) kuzokunikeza incazelo ecacile yemikhawulo ababeka yona yezinsizakalo zokusingathwa ezingenamkhawulo. Uzotshelwa kwenye indawo ngemibandela nemibandela yokuthi i-akhawunti yakho ingamiswa noma inqanyulwe ukusetshenziswa kakhulu kwezinsiza - ngokuvamile ngeke ikutshele ukuthi malini. Futhi kuqinisekile ukuthi cishe YONKE i-web host ngeke ikubekezelele ukusingathwa kwamafayela angekho emthethweni kanye / noma nezinsizakalo. Ngakho-ke uma uhlose ukusebenzisa iwebhusayithi evumela abantu ukuthi balande amafayela athambisiwe, kungenzeka ukuthi uphume enhlanhleni engxenyeni enkulu.
Ukwazi umkhawulo we-akhawunti yakho kukusiza uqonde izinto ezimbili -
Yeka ukuthi kunomusa kangakanani (noma kunesibindi) amabhegi wakho wewebhu abhalwe ohlwini olufanele - Ingabe kufanele uhambe nalolu, noma omunye umphathi wemikhawulo ekhululekile?
Yeka ukuthi inkampani yakho yokusingatha ibonakala kanjani ngokucacile - Ungayethemba yini amagama avela enkampanini yakho yokubamba? Izinkampani ezithembekayo zokubamba ngokuvamile ziba neziqondiso ezicacile ngokulinganiselwa kwe-akhawunti nemigomo yesevisi.
Isibonelo: i-iPage TOS
Ukwenza izibonelo, nakhu okulotshwe kuTOS ye-iPage - qaphela imisho eklanyelwe.
Umsebenzisi uyavuma ukuthi uMsebenzisi ngeke asebenzise amanani amaningi wokucutshungulwa kwe-CPU kunoma iyiphi iseva ye-iPage. Noma yikuphi ukwephulwa kwale nqubomgomo kungahle kube nomphumela wokulungiswa kwe-iPage, kufaka phakathi ukuhlolwa kwamanye izindleko, ukunqanyulwa noma ukunqanyulwa kwanoma yiziphi izinsiza, noma ukunqanyulwa kwalesi Sivumelwano, […]
Funda isibuyekezo se-iPage esigcwele lapha
I-11. Ubungani bemvelo
Ukuba ne-website ye-eco-friendly ibamba ukukhathazeka okuyinhloko kwamanye ama-webmasters.
Ngokuvumelana ne izifundo zesayensi, iseva yewebhu ngokwesilinganiso ikhiqiza ngaphezu kwe-630 kg ye-CO2 (okuyiningi!) futhi idla i-1,000 KWh yamandla ngonyaka. A Ubunikazi bewebhu obuluhlaza Ngakolunye uhlangothi, iveza ngokweqile i-CO2. Ngempela kukhona umehluko omkhulu phakathi komlindi webhubhu oluhlaza kanye nesibhamu sewebhu esingekho eco-friendly.
Uma ukhathalela imvelo futhi ufisa ukunciphisa ikhanda le-carbon elibanjwe yinkampani yakho noma wena, khetha umphathi webhubhu osebenza ngamandla angaphinda avuselelwe (noma okungenani, umphathi wewebhu ochitha amandla akhe ngokusebenzisa izitifiketi eziluhlaza).
Ithiphu Ewusizo: Izinkampani eziningi zokubamba zisebenzisa “isu lokumaketha oluhlaza” eminyakeni embalwa edlule kodwa okubonakala sengathi kuyaphela namuhla. Ngokusekelwe ekubukeni kwami, ama-Greengeeks angenye yokumbalwa okuluhlaza okusebenzayo (hlola uhlu lweGreenGeeks 'EPA Green Power Partner lapha).
I-GreenGeeks iqale ku-2008. Umbiko wabo wamuva owethulwe ku-EPA wawuyi-July 2016 (umthombo).
Uma ufisa ukubamba ama-akhawunti we-imeyili kanye newebhusayithi yakho, kufanele ubheke izici ze-imeyili ngaphambi kokubhalisa. Izinkampani eziningi zokubamba zizofika nekhono lokubamba i-imeyili yakho (into efana nayo [Email protected]) kodwa kunjalo, kungcono ngaso sonke isikhathi ukuhlola nokuqiniseka ngakho, yebo?
Uma kwenzeka izici ze-imeyili zinganikezwa, akukho okunye okukhulu. Kunezindlela eziningi ongayenza ngayo i-akhawunti ye-imeyili kusizinda sakho. G Suite, isibonelo, iyisevisi enikezwa yi-Google ezokwenza ukuthi ube yi-imeyili yakho, egcinwe kumaseva awo. Iqala kusukela ngaphansi njenge $ 5 ngomsebenzisi ngenyanga.
Ithiphu ewusizo: Funda ukuthi ungabamba kanjani i-imeyili yakho futhi uthole okungcono kakhulu ukubamba i-imeyili lapha.
I-13. Isikhathi sokubhaliselwe
Ungamangali uma uthola amabutho wewebhu abathile aphoqa amakhasimende abo ukuthi athathe izinkontileka ezingenakubalwa. Ama-lunarpages, isibonelo, ashintshe isakhiwo sabo samanani ngoJuni 2009 namakhasimende akhishwe ukuthatha inkontileka yokubamba iminyaka engu-5 ukuze ajabulele ukuthengiswa kwe-$ 4.95 / mo. Ama-Lunarpages awasinikezi ngaleyo ndlela manje icala lingasasebenza njengesibonelo.
Ingabe kufanele uzibophezele ezinkontileka zokuhlala isikhathi eside? Impendulo yethu ayikho - Ungalokothi ubhalise nge-host host yewebhu nganoma isiphi isikhathi esingaphezu kweminyaka emibili egijima, ngaphandle uma sinikela ngokucacile noma kunini imali emuva iqinisekisa.
Ithiphu ewusizo: Izinkampani zokubamba ngokuvamile zinikeza izinhlinzeko ezingcono uma abasebenzisi behamba isikhathi eside sokubhaliselwe. Izaphulelo zikhulu; kodwa ngincoma kakhulu abasebenzisi ukuthi bangabhadeli iminyaka engaphezulu kwe-2. Ubuchwepheshe bukhula ngokushesha futhi ungathola izidingo zakho ezihluke kakhulu esikhathini esincane.
I-14. Isipele Sendawo
Amakhompiyutha ahlaselwa, imishini ihluleka, lezi yiqiniso lokuphila ngisho nokufa kanye nezintela. Isayithi lakho lizobe lisengozini kulezi zici, noma mhlawumbe i-hacker ingena kubhulogi lakho le-WordPress bese ishintsha ifayela lakho le-index.php. Mhlawumbe yonke i-database yakho yakhiwe.
Uma umphathi wakho wewebhu enza izigcawu zesayithi njalo futhi akukho lutho lokukhathazeka ngokuthi lezi zenzakalo zenzeka nini. Umhlinzeki wakho wokubamba kufanele akwazi ukubuyisela isayithi lakho eligcwele ngokungabi nesikhathi nhlobo (noma okungenani, i-chunk enkulu yayo).
Kulezi zipele, nansi imibuzo embalwa ebalulekile ukubuza umphathi wakho wewebhu:
Ingabe umphathi wakho webhubhu unikeza izipele ezigcwele njalo?
Isipele sokusayithi singenziwa ngesandla ngephaneli yokulawula?
Ungakwazi yini ukudala izipele ezizenzakalelayo zesayithi lakho kalula nge-cron imisebenzi noma ezinye izinhlelo?
Ungakwazi yini ukubuyisela amafayela wakho wokulondoloza kalula kalula ukuthi akudingeki ukuba ulinde abasebenzi bokusekela ukukusiza ngenkathi kutholakala inhlekelele?
Ithiphu ewusizo: Izithabhile zeWeb ngezindawo ezinkulu zokulondoloza ngaphandle kwezindleko ezengeziwe - Ukusingathwa kwe-A2 (for Swift izinhlelo kanye ngenhla), I-Web Host Face (for Plants Extra izinhlelo kanye ngenhla), Ukubamba kwe-TMD, I-Hostinger, Futhi SiteGround.
I-15. Ingxoxo Ebukhoma noma Ukusekelwa Ngefoni
Ngomuntu ngithanda ukuxoxa ingxoxo ngefoni kanye nezinkampani zokubamba ngewebhu ngamaphepha aphelele (ngakho ngiyakwazi ukufunda nokuxazulula izinkinga ngokwami).
Kodwa yimi kuphela. Ungakhetha ukusekela i-imeyli noma ucingo esikhundleni salokho.
Ekugcineni, sifuna umuntu ongasiphonsa umlondolozi wokuphila ngokushesha lapho sicindezela leyo nkinobho ye-SOS.
Ngizamile Ukuxhaswa kwengxoxo kwezinkampani ezibukhoma ze-28 Ngo-2017 - I-SiteGound, i-InMotion Hosting, i-Web Host Face, iWP Injini, ne-Go Get Space yagqama njengomnqobi kulolu vivinyo.
Ama-Screenshots wengxoxo yami engxoxweni ebukhoma kuWebHostFace. Izicelo zami zengxoxo zaphendulwa ngemizuzwana, futhi imibuzo yami yaphendulwa ngokuzikhandla. Ukuhlangenwe nakho okuphelele nabasebenzi bokusekela abanikazi bewebhu kwakuhle kakhulu. Funda isibuyekezo sami se-WebHostFace.
I-SiteGround - uhlelo lokusekelwa lwezingxoxo ezesabekayo kanye nabasebenzi bokusekela abasiza kakhulu. Umuzwa omuhle kakhulu uwonke. Funda imininingwane ye-SiteGround.
16. Ukuphendula Ngeseva / Izivinini Zokubamba Iwebhusayithi
Asisho ukuthi inkampani yakho yokubamba isabela ngokushesha noma cha! Ukuphendula kuyisilinganiso sesikhathi esithathayo uma othile engena egameni lakho lesizinda kuze kube yilapho iseva ivuma ukuthi isicelo.
Ngokuvamile eyaziwa ngokuthi i-Time To First Byte (TTFB), isivinini sakho sempendulo se-server singaphezu kokuzithokozela kokuthola iwebhusayithi yokulayisha esheshayo. Kuye kwanyatheliswa ukuthi uma umsebenzisi esalinde isikhathi eside ukuze i-website ilayishe, kungenzeka ukuthi bazoshiya isayithi ngaphambi kokuba iqede ukulayisha.
Isivinini sakho sewebhu sithinta nokuthi i-Google nezinye izinjini zokusesha zikubeka kanjani emiphumeleni yokusesha.
Lokhu akuvamile ukuthi inkampani yokusingatha iwebhu izokutshela. Isiqondiso esisodwa esivamile sivame ukubiza. Imishini ephezulu ye-line kanye nengqalasizinda ayifinyeki. Uma umphathi wakho angakwazi ukukhokhisa u-$ 2 ngenyanga ngokubamba, izinto zithola i-fishy encane.
Ukuhlolwa kwesivinini kwakamuva kweBlueHost - isiza sokuhlola sibuyile okokuqala ngo-488ms. Funda imininingwane ye-BlueHost.
Ithiphu ewusizo: Sebenzisa ithuluzi elifana nalokhu I-Byte Hlola, Bitcatcha, Futhi Ukuhlolwa kwekhasi lewebhu ukuhlola isivinini sewebhusayithi.
Ukugoqa Up: Yonke Iwebhusayithi Inezidingo Ehlukile
Into - "enhle" ihlala yigama elihlobene. Asikho isixazululo esinqunyelwe kwizidingo zokubamba iwebhu komuntu.
Ngeke ngincoma a umphathi wewebhu wamahhala uma uqala iwebhusayithi enkulu ye-e-commerce. Angizange ngincome Ukusingathwa kwe-WordPress okubizayo okubizayo uma usebenzisa ibhulogi encane yokuzilibazisa.
Amawebhusayithi ahlukahlukene anezidingo ezihlukile. Konke okudingayo umhlinzeki wesevisi ofanele isingatha iwebhusayithi yakho.
Akukhona mayelana nokuthola umhlabeleli we-web best emhlabeni; Kunalokho, kungokuthola ilungelo lokungena kwewebhu kuwe.
Futhi lapho, unakho - Umhlahlandlela wami wezitolo oyothenga iwebhusayithi. Ngithemba ukuthi inciphisa inqubo yakho yokukhetha ukusingathwa kancane. Lapho ususilungiselele ukubamba kwakho, sekuyisikhathi sokwenza futhi ukubeka iwebhusayithi yakho online!
^ Emuva ohlwini lokukhethwa kokukhethwa komsingathi we-web
Kusebenza kanjani Ukubuyekezwa Kwethu?
Sisebenzisa uhlu lokuhlola lwesilinganiso se-80 ukuze sihlole umphathi wewebhu.
Chofoza lapha ukuze ufunde ukuthi sikala kanjani umnikazi wewebhu.
Umhlahlandlela Wokuthenga Okuningi Wokubamba Iwebhusayithi
Umgcini wewebhu ohamba phambili: Ukukhetha kwethu okungu-10 okuphezulu
Izinsizakalo zokubamba ezishibhile eMakethe
Ukusebenza Kokusingathwa kweWebhu okushesha kakhulu
Ukusingathwa Okuhamba phambili Kwamabhizinisi
Ukusingathwa Okuhamba phambili Kwababhali
Ukusingathwa Okuhle kakhulu Kumawebhusayithi Omuntu
Ithebula lokubuyekezwa kweWebhu yeWebhu
Uhlu lokukhethwa kokukhethwa komsingathi weWebhu
1- Yazi izidingo zakho zokubamba
2- Hlola ukuthembeka kweseva
3- Izinketho zokubamba zokuthuthukisa
4- Izinombolo zesizinda se-addon
5- izintengo zokubhalisa vs izintengo zokuvuselela
6- Inqubomgomo yokubuyiselwa kwemali nesikhathi sesikhathi samahhala
7- Izici ezibalulekile zokubamba
Izici ze-8- e-commerce nokusekelwa
9- Ukusingathwa kwephaneli yokulawula
10- Ukukhawulelwa kwe-akhawunti
11- Ubungani bemvelo
I-12- Ukusingathwa kwe-imeyili ([Email protected])
13- Isikhathi sokubhalisa
14- Isipele sesiza
15- Ukusekelwa kwengxoxo bukhoma / ngocingo
16- Ukuphendula kweseva
Imfihlo Ye-Web Hosting Kwembulwe
I-WebHostingSecretRevealed (WHSR) inyathelisa ama-athikili futhi ithuthukise amathuluzi abasebenzisi abasiza ekusingatheni nasekwakheni iwebhusayithi.
Mayelana . Uluhlu . Humusha . Disclaimer
Silandele: Facebook . Twitter
Isiza esisebenza yi
I-WebRevenue Sdn Bhd (1359896-W)
2 Jalan SCI 6/3 I-Sunway City Ipoh
I-31150 Perak Malaysia
Futhi Izindawo zethu: I-hostScore . YakhaLokhu
Amathuluzi Iwebhusayithi namathiphu
Abakhiqiza beZwebhusayithi Abakhulu Bakamabhizinisi Amancane
Ungabamba Kanjani Iwebhusayithi: Qeda Umhlahlandlela Wokuqala
I-Plesk vs cPanel: Qhathanisa Iphaneli Yokulawula Ukusingathwa
Iqiniso Mayelana Nokusingathwa Okungenamkhawulo
Umakhi wewebhusayithi: I-Wix / Weebly
Umakhi wesitolo: I-BigCommerce / Thenga
Ingabe ama-VPNs Asemthethweni? Amazwe Avimbela Ukusetshenziswa kwe-VPN
Ungayisetha kanjani i-VPN: Umhlahlandlela Wokuhamba
Ungalifihla kanjani noma ulishintshe kanjani ikheli lakho le-IP?
Ukubuyekeza kwe-VPN: ExpressVPN / NordVPN / Surfshark / CyberGhost / I-TorGuard
Imibhalo esidumile (2020)
Ngabe udinga malini ama-bandwidth?
Indlela Yokufinyelela Iwebhu Ebumnyama usebenzisa i-TOR Browser
Indlela Yokuqala Nokuqalisa IWebhu YeWebhu
Ungayihambisa kanjani iwebhusayithi yakho kwenye i-Web host
Uhlu Olukhulu Lamacebo Ebhizinisi Lase-Inthanethi Ukuze Uqale
I-Chaturbate namanye amaWebhusayithi angu-10 Akhiwe nge-Django
Izindlela eziyi-10 ze-Cheaper zokusingathwa kweSayithiGround
Izindawo eziNtsha kakhulu Zokubamba Iwebhusayithi (2020)